वाईडबडी प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ' | Citizen Post News
काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले एक स्वरमा वाईडबडी खरिद प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाही गरिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरुले यो प्रकरणमा दोषी देखिने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै लेखा समितिका सदस्य एवम् नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले वाईडबडी खरिद प्रकरण नेपालको ईतिहासमा कलंक भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने,‘यो नेपालको ईतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको नमूना घट्ना हो । नेपाल एयरलायन्सको ईतिहासमा अरु थुप्रै काण्डहरु छन् । वाईडबडी खरिद प्रक्रियामा ठूलो घोटाला भएको छ, ठूलो अनियमितता भएको छ, यसमा कुनै द्धिविधा छैन । दोषीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ उनले आफुहरुले कसैलाई पनि नजोगाउने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘बदमास गर्नेजति सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ, हामी कारबाही गर्छौं । यो विषय कसैकोलागि पनि क्षम्य हुँदैन् ।’
आफ्नो पार्टीले कसैलाई पनि जोगाउने वा बचाउने काम नगर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,‘नेकपाले कसैलाई छुट दिँदैन् ।’ यद्धपी उनले लेखा समितिद्धारा गठित छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदन संशोधनसहित आउनुपर्ने धारणा राखे । भट्टराईले भने,‘प्रतिवेदन संशोधनसहित आउँछ । हामी प्रतिवेदनलाई सोमबारको बैठकमा निश्कर्षमा पुर्याउँछौं ।’ उनले यो प्रकरणका सबैभन्दा ठूला डिजाईनर वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशकार भएकोपनि आरोप लगाए ।
समितिका अर्का सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले उपसमितिले आधारभुत आधारमै प्रतिवेदन ल्याएको जिकिर गरे । उनले यो प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए । समितिले सोमबार सर्वसम्मतीमा प्रतिवेदन पारित गर्नेपनि उनले विश्वास दिलाए । उनले भने,‘कांग्रेसकै नेता भएपनि कारबाही हुन्छ । जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देवको सवालमा पार्टीको तर्फबाट कुनै ढाकछोप हुँदैन ।’
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि यो प्रकरणमा जसले गलत गरेको छ उसलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेको सुनाउँदै चौधरीले दोषीहरुलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले उपसमितिले प्रतिवेदन ल्याएसँगै सरकारले ३ सदस्यी उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक समिति गठन गर्नुले प्रश्न खडा गरेको पनि गुनासो पोखे । उनले भने,‘कतै उपसमितिको प्रतिवेदन त दराजमा राखिने होईन ? त्यस्तो नहोस् ।’
वाईडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको पाईला–पाईलामा घोटाला भएको उनको दाबी छ । उनले भने,‘यो घोटाला गर्ने जो कोही होस, सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ । दोषी उम्किन पाउनुहुँदैन् ।’समितिकी अर्की सदस्य एवम् राजपा नेपालकी सांसद चन्दा चौधरीले उपसमितिले ल्याएको प्रतिवेदन सोमबार बस्ने लेखा समितिको पूर्ण बैठकले सर्वसम्मतीमा पारित हुने दाबी गरिन् । उनले भनिन्,‘प्रतिवेदनको भाषामा अलिकति तलमाथि भएकोले हामी त्यसमा विचार गरेर अघि बढ्छौं । दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लेखा समितिका हामी सबै सदस्यहरु एकमत छौं ।’
उपसमितिले कुनै पूर्वाग्रह नराखिकन प्रतिवेदन ल्याएको उनको दाबी छ । उनले भनिन्,‘दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । निगमका महाप्रबन्धक कंशाकारले नेताहरु पनि छन् भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेका छन् । को–को नेताहरु छन् ? आधार र प्रमाणसहित नाम खुलाउनुपर्छ । लिखित रुपमा दिनुपर्छ ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री सञ्जय गौतमले वाईडबडी खरिद प्रकरणमा भएको घोटालाबारे लेखा समितिले राम्रो परीणाम ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको सुनाए ।
गौतमले सार्वजनिक लेखा समिति वा उपसमिति भनेको संसदको ‘मिनि–पार्लियामेन्ट’ भएकोले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर गलत गरेको गुनासो पोखे । उनले सरकारले संसदीय समितिलाई अवरोध गर्नेगरि हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न नहुने धारणा राखे । गौतमले भने,‘सरकारले सार्वभौम संसदलाई अंकुश लगाउने कुरा क्षम्य हुँदैन । लेखा समितिको प्रतिवेदनमा चित्त बुझेन भने सार्वभौम संसदमा छलफल हुनुपर्छ । तर, संसदीय समितिलाई काम गर्न नदिएर दबाबमूलक काम गर्नुहुँदैन् ।’
आफूले नै यो प्रकरणमा संसदमा विषय टेबल गराएको पनि उनले जनाए । उनले भने,‘विमान खरिद प्रक्रिया नै गलत थियो । विमानको भारहन क्षमता नै सम्झौता गर्दा एउटा र ल्याउँदा अर्के छ । २४२ मेट्रिक टन हुनुपर्नेमा जहाज ल्याउँदा २३० मेट्रिक टनमात्रै छ । ९ वटा ट्वाईलेट भएको किन्नुपर्नेमा ७ वटामात्रै भएको किन किनियो ?’ आफूले फेरि पनि यो विषयमा संसदमा कुरा उठाउने पनि गौतमले जनाए । उनले नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमात्रै नभएर पूरै समाप्त गर्नुपर्ने धारणा राखे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउनको लागि अब पूरानो धङधङीबाट हिँडेर नहुने उनको धारणा छ ।